နွေဆူးလင်္ကာ: ပြတင်းပေါက်က လေတွေ အရမ်းတိုက်တယ်
ကဗျာလေး လား စာလေးလား လာဖတ်သွားတယ်နော်
ပျောက်နေတာ အတော်ကြာဆို ကွမ်းယာသည်မလေး လင်နောက်လိုက်သွားလို့ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ တင်းနစ်ပွဲတွေ လိမ့်ပြီး ကြည့်နေလို့ကိုး...
အလှူအတွက် သာဓုခေါ်သွားပါရဲ့..ခြင်တွေ တပ်နဲ့ ချီတက်လာပါစေ... ဟိဟိ
ဖတ်ရတာ အစပိုင်းတော့ လွမ်းရမလိုလို ဆွေးရမလိုလိုလေး...
ပြီးခါနီးလေ အရှိန်တက်ပြီး ရယ်မိသွားလေပဲ... ဟိဟိ...
အရေးအသားကတော့ ဆွဲအားအပြည့်ပဲဗျို့... :)
ပိုစ်အသစ်တွေ မတင်ဖြစ်ခဲ့တာ ခြင်တွေနဲ့ စစ်တိုက်နေရလို့ လား..?? ကွမ်းယာသည်လေး မရှိလို့ ကွမ်းမစားတော့ဘူးဆိုတော့ အေးအေးဆေးဆေး ခြင်နဲ့ ရန်ဖြစ်လို့ရပြီ :D
ကိုနွေဆူးကြီး ရောဂါလည်း မသေးပါလား...
ဆေးမှန်မှန်သောက် မှ ပေါ့ ..
ကွမ်းမစားပဲ ပီကေ ပြောင်းဝါးနေတာ လား..
ခု လေတွေ ရော မိုးတွေပါ သည်းနေတယ်လေ.
ကြာကြာမှ တခါ ပေါ်လာလို့ကဗျာကယာ ရေးလိုက်ရတယ် .. .. နေကောင်း ရဲ့လား...
နံပါတ် (၇)မှာ “ဘော်လုံး ..” ဖြစ်နေတယ်၊
ပြတင်းပေါက်က လေစိမ်းတွေကို မခံနိုင်ရင် အပြီးသာ ပိတ်လိုက်ပါတော့ :D
ကျွန်တော်ကတော့ ကိုနွေဆူး ရဲ့
ကို ဆိုးသူပဲ ...
ပြုံးရမလို ၊ ခံပြင်းပေးရမလို နဲ့ ... :)
ကဗျာဆိုလဲ ကဗျာလို့ ဖတ်လိုက်ပါတယ် ...
အင်း ..ဟုတ်နေသလိုလိုပဲ ...
ဒီနောက်တီးနောက်တောက် စိတ်ကတော့ကွာ ... အလွမ်းစာရေးတာတောင် ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း မရေးရဘူး...
ဖတ်တဲ့လူလည်း ပထမပိုင်းတော့ လွမ်းပေးတော့ မလို့ဘဲ။ နောက်တော့ ရယ်လိုက်မိတယ်။
အနှီ ဆရာနွေဆူးလင်္ကာသည် နှလုံးသည်းပွတ်တို့
လည်း စိတ်နာလှသည်ရှိ၍ တိကနဲရိကနဲ ပြတ်သွား
မန်းလေး မှာတော်တော်ပေါတဲ့ ခြင်တွေ. နွေဆူးလင်္ကာ ဆီ လွှတ်လိုက်အုံးမှပဲ.. ဟိုမှာ ကုသိုလ် လုပ်နေတယ်လို့ ကြိုက်သလောက် သွေးစုတ်ယူလို့ ရတယ်လို့.. သူ အကျင့်မပျေက်သေးရင်တော့.. ဖန်း.. ဆိုပြီး.. အသေတော့ ခံနိုင်ရမယ်လို့ ပြောပြီး လွှတ်လိုက်မယ်နော်... :)
ကျနော် ကူးယူထားလိုက်မိတဲ့ အပိုဒ်လေးပါ...
ဖတ်ရင်းနဲ့ ပြုံးဖြစ်ခဲ့မိတယ်.. ကိုဆူးရဲ့ စာရေးချက်က တစ်မူထူးခြားတာတော့အမှန်....